Yakavanzika Policy - JPEG.to
Kuvanzika kwako kwakakosha kwatiri. Ndiyo mutemo weJPEG.to kuremekedza zvakavanzika zvako zvine chekuita nechero ruzivo rwatinogona kutora kubva kwauri pawebhusaiti yedu, https://jpeg.to , uye mamwe mawebhusaiti atinawo uye atinoshanda.
Yedu webhusaiti inogona kubatanidza kune ekunze saiti ayo asiri kushanda nesu. Ndokumbirawo muzive kuti isu hatina masimba pamusoro pezviri mukati nemaitiro enzvimbo idzi, uye hatigone kugamuchira mutoro kana mutoro pamitemo yavo yega yekuvanzika.
Iwe wakasununguka kuramba chikumbiro chedu cheruzivo rwako pachako, nekunzwisisa kuti isu tinogona kutadza kukupa iwe mamwe eako masevhisi aunoda.
Kuenderera mberi kwekushandisa kwedu webhusaiti kunoonekwa sekugamuchirwa kwemaitiro edu kutenderedza zvakavanzika uye ruzivo rwevanhu. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve isu mabatiro emushandisi dhata uye ruzivo rwevanhu, inzwa wakasununguka kutibata nesu.
Iyi bumbiro inoshanda sa6 Chikumi 2019.
Mafaira akaiswa akadzimwa mushure maawa maviri uye mafaera akashandurwa anobviswa mushure maawa makumi maviri nemana. Kuti tikwanise kudzikisira kushungurudzwa, isu tinonyora iyo IP kero iyo yakaita shanduko kana faira rashandurwa, hapana kusangana kune mafaera uye IP kero. Mushure meawa rimwe chete IP kero inobviswa saka zvakasununguka kuita imwe shanduko.
19,395 kutendeuka kubvira 2020!
Iwe wapfuura yako yekutendeuka muganho weatatu paawa, unogona kushandura mafaera ako mu 59:00 kana Sign up uye shandura ikozvino.